China Spout pouches-B ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Hong Bang
Uru nke Spout Pouches
The spout pouch bụ a ọhụrụ nke mbukota mode nke kpọmkwem imewe maka mmiri mmiri dabeere ngwaahịa.The mere n'azụ ude nke ndị a spouted pouches bụ ya ọrụ enyi na enyi imewe nke bụ apt maka ịchekwa mmiri mmiri, pasty ma ọ bụ omume rụrụ nnukwu ihe. Na mgbakwunye, n'iji ya tụnyere PET ma ọ bụ karama iko, a na-eji obere akpa ndị dị mfe maka njem na nke zuru oke maka shelf mkpọsa ndị a na-ejikarị maka ngwaahịa dị ka ebe a na-asacha mmanụ ụgbọ ala, jelii ụmụaka, nri mmiri, ihe ọ coldụ coldụ oyi na ụlọ mposi wdg.
A na-emechi obere akpa a na-emechi emechi ma mepụta ya na weld weld na okpu. Enwere ike ịmepụta spouts ndị a maka njikwa njikwa, ịdị mma na nchekwa ma wee dabara maka ngwaahịa mmiri dị ka ihe ọ beụ beụ, ihendori ma ọ bụ ndị na-ehicha ihe. Enwere ike ịhazi ogo na ụdị dị ka ndị ahịa chọrọ na ihe achọrọ.
Pack Smart na-enyekwa pouches emebiri emebi nke na-agụnye njigide na mmechi dịka nkọwa nke ngwaahịa dị iche iche.
Nke a bụ HONGBANG Packaging. Anyị na-enye dị iche iche nri nkwakọ akpa ngwọta maka mkpa dị iche iche na ngwa.Gwa anyị ihe ị chọrọ ka anyị ga-ezute ụdị mkpa gị niile. Anyị na-adịghị ịzụlite ngwaahịa na-agbalị ka ụgbọala gị kwupụta ha; anyị na-ege ntị na mkpa gị na injinịa ọhụrụ nke ga-edozi nsogbu gị nkwakọ ngwaahịa.
Njirimara na Opiont
Vivi Printing, kenkowaputa ma ọ bụ matte okokụre
Spout na Anti-ilo okpu
Pụrụ iche Ọdịdị
Guzo ọtọ ma ọ bụ ewepụghị
Ihe owuwu ndị a na-ahụkarị (ihe eji arụ ọrụ) nke obere akpa ego
Middle Layer: Leak-proof, na Ọrụ dị ka ihe mgbochi mgbochi iji hụ na ọdịnaya nke obere akpa a na-echekwa ma dị ọhụrụ.
Ngwa (rieslọ ọrụ)
Pasty na Liquid Ngwaahịa
Ngwaahịa ụlọ na ubi
Ahụike na Mma Ngwaahịa
Industrial & ọzọ nkwakọ
Customization Ka Nweta Kpọtụrụ
Nke gara aga: Pout akpa
Osote: Obere akpa-C
Omenala Guzosie Pouch
Flexiable Guzosie Up obere akpa
Plastic Guzosie Up obere akpa
Omenala E Bipụtara Plastic Film apụta Printing maka ...